Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Rajasthan dia nanao heloka ratsy tamin'ny mpizahatany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Rajasthan sy ny asan'ny mpizahatany
Efa fanjakana manan-karena mpizahatany, Rajasthan any India dia nanao dingana izay manome toky fa hanatsara sy hanatsara ny traikefa fizahan-tany, na ho an'ny mpandeha an-trano sy iraisam-pirenena.
Mety ho lasa lavitra ny lalàna vaovao amin'ny fiarovana ireo mpizahatany amin'ny fanorisorenana sy ny fanandramana ratsy mandritra ny fialan-tsasatra any Rajasthan.
Ny fitondran-tena tsy mendrika amin'ny mpizahatany dia hoheverina ho fandikan-dalàna, heloka bevava.
Raha mamerina an'io karazana fitondran-tena io ny olona iray, dia halefa any am-ponja ilay mpandika lalàna raha tsy misy ny fandoavana onitra.
Ny fanjakana avaratra, izay mahazo mpitsidika avy any amin'ny firenena ary koa avy any ivelany, dia namoaka lalàna izay afaka manampy amin'ny fiarovana ny mpizahatany amin'ny fanorisorenana sy ny fanandramana ratsy mandritra ny fialan-tsasatra.
Izay fitondran-tena tsy mendrika atao amin'ny mpizahatany dia hoheverina ho toy ny fandikan-dalàna, ary raha miverina io karazana fihetsika io dia horaisina am-ponja ilay mpandika lalàna raha tsy misy ny fandoavana onitra.
Mba hahatratrarana izany dia nisy fanitsiana natao ary nampidirina ny fizarana 27A ao amin'ny Varotra fizahan-tany Rajasthan, Lalàna momba ny fanamorana sy ny lalàna mifehy 2010. Nalefa tamin'ny alàlan'ny latsa-bato tao amin'ny Antenimieram-pirenena. Nilaza ny mpitarika ny indostria fa hojereny am-pahalianana ny fomba fampiharana an'io fepetra io amin'ny tany.
Ny andininy faha-13 amin'ny lalàna mifehy ny lalàna mifehy ny lalàna 2010 dia miresaka momba ny “fandrarana ny asa sy ny hetsika sasany any amin'ireo toerana fizahan-tany, faritra ary toerana itodiana”, izay mandrara ny fiantsoana, ny fangatahana ary ny fivarotana entana amin'ny toerana manodidina ny fizahan-tany.
Na dia mahazo mpizahatany maro avy amin'ny lavitra sy akaiky aza ny fanjakana mba hijery ireo zava-manintona voajanahary sy tsangambato marobe, matetika dia misy ny fitarainana noho ny fivarotan'ny mpivarotra sy mpivarotra azy ireo, ka mamela fahatsapana sy traikefa ratsy. Manoloana izany indrindra dia nihabetsaka ny tranga heloka bevava vehivavy nahatonga ny mpizahatany vahiny hanao fialantsasatra any an-toeran-kafa.
Rajasthan dia mpisava lalana amin'ny fizahan-tany miaraka amina zava-manintona ara-kolontsaina sy voajanahary ary koa fampisehoana zava-kanto. Tao anatin'izay taona faramparany izay, na izany aza, ny fanjakana toa an'i Madhya Pradesh, Kerala, ary Goa dia nahita hevitra vaovao sy mikasa ny hitaona ireo mpizahatany.
Ireo trano mimanda sy lapan'ny fanjakana andriana manana fananana lova ihany koa, dia tsy mitovy, fa tsy maninona izany raha nahazo anarana ratsy koa ny fanjakana satria misy mainty hoditra mainty manaratsy endrika ny fanjakana.
Hatraiza ny fepetra vaovao hialana amin'ny tsy fanao tsy mbola hita.